Posted by မြတ်ပုလဲဖြူ at Monday, August 05, 20130comments
ကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးစိတ်ပျော်ရွှင်ဖို့ CEO ကော်ဖီသောက်ကြစို့
သကြားမပါ3in 1 နဲ့ သကြားပါ4in 1 နှစ်မျိုးရှိပါတယ်...ကော်ဖီတစ်ဗူးကို အထုပ် ၂၀ ပါပါတယ်..
ဈေးနှုန်းကတော့ Double Crane Member ဈေး ၁၄၀၀၀ ကျပ် နှင့် လက်လီအရောင်းဈေး ၁၆၄၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်....
Posted by မြတ်ပုလဲဖြူ at Thursday, March 07, 20132comments
Labels: Double Crane, Health Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
Learning English : Job Offer
Series 1 Episode2- Job offer ( < အသံဖိုင်နားထောင်ရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
အရမ်းအလုပ်များနေတယ် သူငယ်ချင်းရယ်။ Venture Capital။ အဲ့ဒါက အခုအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းနေတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာ အခွင့်အရေးတွေ အကုန်ပွင့်နေပြီ။ ပြီးတော့ ငါကလည်း ဒီမှာ ရနိုင်သမျှ အကုန်လုပ်ဖို့ပဲ။ မင်းလည်း အလုပ်ပြောင်းဖို့စဉ်းစားသင်ပြီ Harry။ လှုပ်ရှားမှုလေးနည်းနည်းတော့ လုပ်သင်ပြီ။
ဒီမှာလည်း ကွန်ပြူတာ ကျွမ်းကျင်သူတွေအများကြီးရှိနေတာပဲ။ မင်းတစ်ခုခုကို အထူးပြုဖို့လိုတယ်။
ဟုတ်တယ်... ငါအတည်ပြောနေတာ။ နားထောင်။ ငါမနက်ဖြန် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်က လူတွေနဲ့ စကားနည်းနည်း ပြောမယ်။ အခုအချိန်မှာ IT အဖွဲ့မှာ လစ်လပ်တဲ့နေရာတွေ ရှိနေတာ ငါသိတယ်။ မင်း လွယ်လွယ်နဲ့ရနိုင်မှာပါ။ အခုတော့ သွားလိုက်ဦးမယ်။ မကြာခင်ပြန်တွေ့ကြတာပေါ့။
ပြောနေရင်းနဲ့မှ။ နင်ဘာလာလုပ်တာလဲ? ဆိုင်မှာရှိနေသင့်တာ မဟုတ်ဘူးလား?
အကုန်လက်မှုပစ္စည်းတွေပဲလေ။ ဒါပေမယ့် ငါပြောခဲ့သလိုပဲ။ ငါ့ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးကို ဖိနပ်ဆိုင်လုပ်ရင်းနဲ့ပဲ မကုန်ဆုံးချင်ဘူး။
အင်း၊ ဟုတ်တယ်... ငါသိတဲ့ တစ်ယောက်ယောက်ကိုပဲလုပ်စေချင်တာ... ငါယုံကြည်နိုင်မယ့်သူပေါ့...
ဟင့်အင်း... တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။
အင်း၊ ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အတိအကျကြီးမဟုတ်ဘူး... ငါတို့က စားသောက်ဆိုင်တော်တော်များများကို အစားအသောက်တွေ ထောက်ပံ့ပေးတယ်လေ။ ဒါပေမယ့် ပြောပြမယ်... အခုအချိန်မှာတော့ အိမ်မက်ဆိုးကြီးပါပဲ။
အင်း၊ အခုတစ်လော အလုပ်တွေအရမ်းများတယ်... မလိုက်နိုင်တော့ဘူး။ အဲ့ဒါ ငါ့အဖေလုပ်ငန်းလေ၊ ဒါပေမယ့် သူက အခုအသက်ရလာပြီလေ။ ငါ့ဦးလေးလည်း ငါတို့နဲ့တူတူအလုပ်လုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူက စိတ်မ၀င်စားဘူး။ အဲ့တော့ ငါ့အပေါ်အကုန် ကျလာတာပဲ။ ဘာတွေ ၀င်လာပြီး ဘာတွေထွက်သွားတယ်ဆိုတာ မမှတ်နိုင်တော့ဘူး။
ကြားရတာတော့ ခင်ဗျားမှာ ကုန်ပစ္စည်း ခန့်ခွဲမှု စနစ်ကောင်းကောင်းလိုနေသလိုပဲ။
ဟုတ်တယ်။ အဲ့ဒါ ငါတွေးနေတဲ့အတိုင်းအတိအကျပဲ - ခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်သိသွားလဲ?
အဲ့ဒါက ကျွန်တော့အလုပ်လေ။ ကျွန်တော်က ကွန်ပြူတာ အခြေပြု ကုန်ပစ္စည်း ခန့်ခွဲမှု စနစ်တွေ တည်ဆောက်တယ်။ IT စီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်တာ အကုန်လုံးပေါ့။
အားပါး! အရမ်းကောင်းတာပဲ။ နားထောင်... အခုအတည်ပြောနေတာနော်... အလုပ်ကိစ္စကို စိတ်ဝင်စားလား?
အင်း...အဲ...ဟုတ်ကဲ!... ခုနောက်ဆုံး ငါးမိနစ်မှာ အလုပ်ကမ်းလှမ်းတာ ၃ ခုရှိပြီ! ငါဘာလုပ်သင့်လဲ?
Posted by မြတ်ပုလဲဖြူ at Tuesday, December 11, 20120comments
Labels: Learning English Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
အင်္ဂလိပ်စာကိုအတိုင်းအတာတစ်ရပ်အထိ ကျိုးစားလေ့လာထားပေမယ့် ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ကားတွေ ကြည့်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အပြင်မှာ အမေရိကန်လူမျိုး၊ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတို့နဲ့ ကြုံကြိုက်လို့ စကားစမည်ပြောတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ် ဟောဒီလိုမျိုး "'Don't'cha wanna get somthin' tweet?" လို့အပြောခံရတဲ့အခါသူဘာပြောလိုက်မှန်းကိုမသိတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်။ နားမလည်တာက သူတို့ပြောတဲ့စကားဟာ ၀ါကျတည်ဆောက်ပုံ၊ ဝေါဟာရခက်ခက်ခဲခဲတွေ၊ အီဒီယံ စတာတွေသုံးပြီးပြောလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းစာကြောင်းလေးတွေ ကိုတောင် နားမလည်တာမျိုးဟာဘာကြောင့်ပါလဲ။ ဗီဒီယိုဆိုရင်တော့ အကြိမ်ကြိမ်ရစ်ပြီးမရ ရအောင်ပြန်နားထောင်လို့ရပေမယ့် လက်တွေ့ မျက်နှာခြင်းဆိုင်ပြောတဲ့အခါဆိုရင်တော့ ဆက်သွယ်မှုပြဿနာဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါတောင်မှ အာဖရိကန်- အမေရိကန် တွေပြောတဲ့စကားကို ကျွန်တော် အခုထက်ထိနားလည်ဖို့တော်တော်ခက်နေပါသေးတယ်။
* ဥပမာအားဖြင့် သြစတြေးလျတွေပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားသံဟာဝဲလွန်းတဲ့အတွက် သူတို့ native speakers အချင်းချင်းတောင် နားလည်ရခက်ပါတယ်တဲ့။ အထူးသဖြင့် vowel sounds တွေမှာ တမူထူးခြားနေတတ်ပါတယ်။ ထင်ရှားတဲ့ဥပမာကတော့(အနီးစပ်ဆုံးအသံဖလှယ်ရင်) ‘AY’ “အေး” ဆိုတဲ့အသံကို ‘IE’ “အိုင်း” လို့ထွက်လေ့ရှိတဲ့အခါ Monday ကို mon-die လို့ကျွန်တော်တို့ကြားရလိမ့်မယ်။ “Monday isagood day” ဆိုတဲ့စာကြောင်းကိုသူတို့ပြောတဲ့အခါ “Mon-die isagood-die” လို့ပြုံးချင်စဖွယ်ကြားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ခုက tt နှစ်လုံးထပ်ပြီးပြောတဲ့အခါ အင်္ဂလိပ်၊ အမေရိကန်တွေနဲ့ပြောတာမတူဘဲ D သံထွက်ပြောတတ်ပြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် butter က budder, latter က ladder လိုအသံမျိုးကြားရပါလိမ့်မယ်။ တခါတရံ liddle သူတို့ပြောသံကြားရင် မအံ့သြပါနဲ့။ သူပြောချင်တာက little ပါတဲ့။ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ဒါကသြဇီအသံထွက်တင်ပါ။ တခြား အင်္ဂလိပ်၊ အိုင်းရစ်၊ စကော့တစ်ရှ်၊ နယူးဇီလန်၊ accent တွေကလည်းသူ့နည်းနဲ့သူထူးခြားနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နဲ့နားယဉ်နေတဲ့လေယူလေသိမ်းတွေကတော့ မီဒီယာလောကကို ကြီးစိုးထားတဲ့ ဟောလိဝုဒ်ရဲ့ အမေရိကန် accent ပဲဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
accent နဲ့ပတ်သက်လို့ ရယ်ရတဲ့ ဗွီဒီယိုလေးကို ဒီမှာ http://mywayenglish.multiply.com/video/item/2/Scottish_Irish_Englis... ကြည့်ကြည့်ပါဦး။
ထားပါတော့။ accent ဆိုတာက ဒေသနဲ့ဆိုင်တော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာသူတွေအနေနဲ့ တစ်ခါတစ်လေမှ တွေ့တဲ့နိုင်ငံခြားသားနဲ့ Foreigner Talk ပုံကြီးချဲ့ပြီးပြောရင်အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းပြောဆိုနေရမယ့်သူဆိုရင်လည်း ပြောဆိုဆက်သွယ်တာကြာလာတာနဲ့အမျှ သူလေသံကိုယ်မှန်းမိ၊ ကိုယ့်လေသံသူမှန်းမိဖြစ်လာတာပါပဲ။
အဓိကပြောချက်တာက ဒုတိယအချက်ပါ။ ဒါကတော့ကတော့ native speakers တွေရဲ့ ပုံမှန်အပြောစကားမှာ contracted form လို့ခေါ်တဲ့ စကားလုံးတွေကိုချုံ့ပြီးပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သင်ထားတာက I have got to go. ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာလည်း ၀ါကျအပြည့်အစုံ I have got to go လို့ပဲပြောတယ်မဟုတ်လား။ သူတို့ကတော့ I’ve gotta go. လို့ပြောတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့နားကဟိုဖက်ကနေဒီဖက်အထိရွာ လည်ကုန်ပါတယ်။ သူတို့ကို Relaxed pronunciation , condensed pronunciation or word slurs လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ အင်္ဂလိပ်စကားမှာမှမဟုတ်ဘဲ ဘာသာစကားတွေတိုင်းမှာ အပြောစကားကျရင်ဖြစ်တတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်မျိုးပါ။ စကားပြောနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ ဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးမဆန်ဘဲ ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာ ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေပြောဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသနဲ့လည်းဆိုင်တယ်။ ပြောတဲ့လူတွေရဲ့လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်း Social class နဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကော့သောင်းရောက်ကာစတုန်းက အထူးအဆန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ အသုံးလေးတွေက ဒီမှာ “လက်ဖက်ရည်သောက်မယ်” ဆိုရင် “ဖက်ရည်သောက်မယ်”။ ဟိုဘက်ကမ်း(ရနောင်း)သွားမယ်” ဆိုရင် “ဘက်ကမ်းသွားမယ်”တဲ့။ ယောက်ျားလေးတွေစကားပြောပြီဆိုရင် “. . .ရေ . .” ဆိုတဲ့အာလုပ်စကားကအမြဲတမ်းပါနေတော့တာပါပဲ။ အခုတော့လည်းနည်းနည်းအသားကျသွားပါပြီ။ ဒီတော့ အသုံးများတဲ့ contracted form တွေကိုသိထားတဲ့အခါကျရင်အရင်လိုရွာမလည်တော့ဘဲ ဟန်ကျပန်ကျ နားသောတဆင်နိုင်တော့မှာပေါ့။ အောက်မှာတော့ အတော်အတန်ပြည့်စုံတဲ့ list လေးတစ်ခုပေးထားပါတယ်။http://www.davidtulga.com/ref_rp.htm ကနေယူပေးထားပါတယ်။
တစ်ခုသတိထားရမှာက ဒီပုံစံဟာ အပြောပုံစံမှာပဲသုံးပြီး အရေးပုံစံမှာမသုံးသင့်ပါဘူး။ ကနေဒီယံအဆိုတော် Shania Twain ရဲ့ I'm Gonna Getcha Good! သီချင်းလေးနားထောင်ပြီးဒီစာလေးအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။
Labels: Knowledge, Learning English Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook